Ukuhlaselwa kwengqumbo kubantwana - oku akukwenkqisayo njengoko abazali bengabonakala beqala ukujonga. Enyanisweni, njengoko iinombolo zibonisa, ukuxakeka okunjalo kusemgangathweni. Emva koko, akukho bantwana abangenomsindo okanye abacaphukisayo.
Ukuhlaselwa kokuqala komsindo kubantwana kunokuvela kwiminyaka emibili ukuya kwemihlanu. Ibonakalisa ngokukhawuleza, ukuziphatha kakubi, isongelo. Kananjalo inkunzi inokudiliza amathoyizi yabanye abantwana, ihlekise ngontanga. Uhlaselo lomsindo luqala ngenxa yokuba inkunzi kunye nomntu iphikisana, ivakalelwa kukuba umntu uyangqinela kwihlabathi lakhe. Umsindo wengane unomdla wokukhawuleza. Umntwana uqala nje ngemizuzwana embalwa, uqala ukukratshiza, ukuthukuthela kunye nokuzola kuba nzima kakhulu. Phantse bonke abazali kwiimeko ezinjalo baqala ukumbetha umntwana. Enyanisweni, ukhetho lwendlela enjalo yokusombulula le nto alunganga kakuhle. Ukuba umntwana uqala ukuqhuma komsindo, akafanele ajeziswe ngandlela naliphi na ngamandla, kwaye nangakumbi ngokubonisa ukucaphuka kunye nomsindo. Ngokuchasene noko, kwiimeko ezinjalo umntu kufuneka afunde ukubonisa umzekelo wokuzithiba kunye nokunciphisa ukuphendula okungalunganga.
Ngoko, njani ukuziphatha kwabazali ngexesha lokuvutha komsindo kubantwana? Okokuqala, kufuneka uhlale uxolo. Inyaniso yokuba intlungu yabantwana idlula ngokukhawuleza kwaye abantwana baqala ukuziphatha njengangaphambili. Bafuna nje ukukhupha, kwaye umsindo uwanceda kule nto. Ngako oko, ngelixa umntwana ehlalisa, abazali kufuneka bahlalise. Esikhundleni sokumemeza kumntwana, kufuneka uxoxe naye kwaye umthulise. Unina okanye utata kufanele enze ngendlela eqondakalayo, kwaye angayisebenzisi kakubi umntwana ngenxa yokusabela kwakhe kwisiganeko esithile. Ungatsho into efana nale: "Ndiyayiqonda indlela owacaphukile ngayo, ngoko yintoni ...". Vumela umntwana ukuba abone kumama wakhe kunye noyise akuzona iintshaba, kodwa kunye. Emva kokuba uqaphele ukuba umntwana uqala ukuzola, zama ukutshintsha ingqalelo kwaye uncede unqabile. Abanye abantwana bathatha umdwebo, umntu unokuthi athathe nje. Ukuba umntwana wakho ekucela ukuba umshiye wedwa okanye ufuna ukubetha ibhola, akufanele uwenqabe. Umntwana, njengomntu omdala, kufuneka akhululwe iimvakalelo ezingekho phantsi, mhlawumbi uya kuziva ecinezelekile.
Abantwana mabahlale bexubusha iingqumbo zabo zomsindo, ezibangela nemiphumo. Nangona umntwana oneminyaka emithathu kuphela ubudala unokukuqonda ukuba unokukwazi ukuchaza yonke into. Kubalulekile ukuqwalasela imbangela yokuhlaselwa komsindo, ukuziphatha komntwana, kwaye ubuze ukuba ngaba kuye kwamnceda ukuba asombulule ingxaki. Ngokwemvelo, le ndlela yokuziphatha ayisoloko isisombulula ingxaki, kodwa iyancipha. Ukuba umntwana ngoncedo lwakho uyaziqonda oku, ixesha elizayo uya kuzama ukuzilawula.
Sonke siyazi ukuba akunakwenzeka ukugcina umntu, nokuba uyinto encinci, yonke into ecasulayo. Yingakho kufuneka afunde indlela yokuzilawula ngayo. Ukuze unqande ukutshabalalisa, mfundisa umntwana wakho iindlela ezithile zokungahambi. Ngokomzekelo, unokuthetha ngokukhawuleza ukuba uyacaphuka, ade aqonde ukuba uyacima. Okanye vula yonke into ibe yinto yamagama. Sitshele ukuba kukho iindidi ezimbi ezingabonakaliyo emhlabeni jikelele onokuthi uthinte umntu aze ahlale kuyo. Ukusuka kulo, ujika ube yinto embi kunye nomnxeba. Ukuba inkunzi yesazi ukuba yinto enjalo, loo mdiza obi ufuna ukubamba amandla phezu kwakhe. Ngoko ke, akufanele siphumelele kumsindo wobumlingo size silwe ukuze sihlale sinomusa. Ngombulelo kwezo ndlela ezintle, unokufundisa umntwana ukuba azilawule, angabi ukumemeza nokuba angafungi nasiphi na isiganeko.
Khumbula ukuba ukuthetha nabanye abantwana abanokubona ubuqhophololo bendlu okanye kumabonwakude kwenza abantwana bachukuke baze bathuthumele. Kwaye emva kwexesha, kuya kwindlela eqhelekileyo yokuziphatha. Ngoko ke, ukuba ubona ukuba umntwana uyaba nobudlova, qhubeka uzama ukumchazela indlela yokubonisa iimvakalelo, kodwa ungacasuli abanye.
Iintanda zezingane zokuzithandela
Ukuphuhliswa kwabantwana kwiinyanga ezisibhozo
Ngubani olala naye umntwana?
Ukuphuhlisa ukucinga kwengqondo yomntwana
Rollatini isitshalo seqanda ngeeshizi
Ushizi osiweyo kwi-nori
Ikhekhe "Iindawo ezibhubhisayo"
Iimpazamo eziqhelekileyo kunyango lwebanda
Iibhisikidi ze-tshokoleta kunye ne-espresso kunye ne-sugar icing
Umntu ozelwe ngonyaka webhokhwe
Abafana bakaDima Bilan bakhathazeke ngempilo yakhe, ifoto
I-Alaska pollack kunye nemifuno
Umfazi kaPaul of Adult Agatha Mutsenietse wanika i-Instagram icebiso kumama omncinci
U-Beaver wanqunyulwa ngeenwele ezimfutshane
Ingulube ihamba kunye nemifuno